सिन्धु विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, १ वैशाख २०७८)
कम्पनीको शेयर मूल्य मंगलबार अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. २४६ पुगेको हो । मंगलबार कम्पनीको २ लाख ४६ हजार ८८८ कित्ता बराबरको शेयर खरिद विक्री भएको छ ।
कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट यस वर्ष शेयरधनीलाई केही पनि लाभांश दिएन । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रु. ३ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको छ ।
चुक्ता पुँजी रु. ५५ करोड ७४ लाख ५६ हजार रहेको कम्पनीले जगेडा कोषमा रु. ६ करोड १४ लाख र रिटेन्ड अर्निङमा रु. ३ करोड ६ लाखभन्दा बढी सञ्चित गरेको हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रु. १ करोड ५७ लाख रहेको छ ।
कम्पनीको ६० दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सेतो क्लोजिङ मारुबोजू बनेको छ भने विगत तीन दिनको मैनबत्ती हेर्दा ‘थ्री ह्वाइट सोल्डर’ बनेको छ । यस्तो मैनबत्तीले बजारमा कम्पनीको हालको प्रवृत्तिमा निरन्तर बढ्ने संकेत गर्छ । आरएसआई ओभरबौज्टजोन ८७ दशमलव ४३ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद चाप उच्च रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन २० दशमलव ३६ बिन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम मध्यम हुन्छ भने प्रतिफल पनि मध्यम हुने गर्दछ ।
मंगलबारको शेयर मूल्य रु. २४६ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. २०४ मा टेवा पाउने देखिन्छ । कम्पनीको यस दिनको शेयर मूल्य ६० दिनयताकै उच्च कायम भएको हो ।